October 2012 | IT Sharing Network
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ထွေထွေထူးထူးပြောပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော် ဗားရှင်းအသစ်ကလေးထွက်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ လုပ်ဆောင်ပုံပိုကောင်းလာတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာတွေကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ licensing and activation of Microsoft Office and Windows အတွက်ပါ။ စိတ်ကြိုက်သွင်းနိုင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးအားလုပ်မှာလည်းအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Net framework 4.0 or 4.5 သွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် 3.5 မှာ အလုပ်လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ office ဆိုရင်တော့ ၂၀၁၀ လောက်ထိ အလုပ်လုပ်ပေးမှာပါ။ ၀င်းဒိုး activate မဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာများပါ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးမှ activate လုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
Veronisoft Get IP and Host 1.4.8 | 897.34 KB
pc ရဲ့ system ပြုပြင်ပြီးမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ အရင်လည်းတင်ပေးဘူးပါတယ် ခုဟာလေးက version အသစ်ကလေးမို့ ပြန်လည်တင်ပေးတာပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး အသုံးပြုပုံလည်းလွယ်ကူပါတယ် fullversion လေးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တာလေးတွေပါ တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ အောက်မှာပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ network , usb, folder autorun တွေကို ဖျောက်ထားမယ် ပိတ်ထားမယ် လော့ချထားမယ် အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို တစ်နေရာထဲမှာ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။သူ့အထဲက လုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ Major Features:ကတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မိမိကွန်ပျူတာမှ folder များကို အခြားသူများ မမြင်စေချင်ရင်ဖျောက်ထားပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။အသုံးပြုပုံလည်းလွယ်ကူပါတယ် ။ portable version လေး ဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က mediafire လင့်လေးက ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Java Myanmar Leaning စာအုပ်ကလေးကို Cbox က သူငယ်ချင်းတောင်းထားလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..... ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာမြည်းလေးဖတ်လို့ရအောက် စာမျက်နှာအနည်းငယ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .... လေ့လာလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 Recovery Mode တင်မယ်
ခုပြောမဲ့နည်းလေးကတော့ အခြားဖုန်းတွေ မှာ CMW mode တင်သလိုလေး S advance ကို TWRP recovery mode တင်မဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဖုန်းကို Unknown sources ရယ် USB debugging ရယ် allow mock locations ရယ် အဲဒါတွေ ကိုအမှတ်တွေ ပေးထားပြီးတော့ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၁၀ စက္ကန့်လောက်ကြရင်တော့ downloading mode ကိုဝင်ပါ့မယ် ၀င်ရမဲ့လုပ်တွေကတော့ volume down+menu+power ခလုပ်သုံးခုစလုံးကို တပြိုင်တည်းဖိထားပါ mode ကိုမြင်ရရင် ခလုပ်တွေကိုလွတ်ထားပြီးတော့ volume up ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ ဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ Thinker Software Sketch Master v4.8 လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ ခဲခြစ်ပန်းချီ Frames စသည်တို့ကိုအလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
You can make picture with Frames,Make album with photos and send it to your friends. Capture photo from PC Camera in real time, And show real sketch effect. 165 frames.
AVG 2013 Build 2740a5822 (x86/x64) with Keygen (All Product)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... AVG သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုလိုတဲ့ AVG Software ဒေါင်းလော့လင့်နှင့် (All Product) Keygen, Serial လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Anti-Virsus နှင့် Internet Security ကို x86 / x64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် အသုံးပြုလိုရာ ရွေးချယ်ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... Free Version အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်လည်း Free Version ကို ဒေါင်းယူနိုင်အောင် တစ်ခါတည်း လင့်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Software လင့်တွေကို မူရင်းလင့်အတိုင်းထည့်ပေးထားပြီး serial နှင့် keygen ကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
dvd ခွေတွေကို အလွယ်ကူဆုံး အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးကူးပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။အသွင်အပြင်ကလည်းရိုးရှင်းပါတယ် အသုံးပြုပုံလဲလွယ်ကူပါတယ်။အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအောက်ကလင့်လေးကဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Windows 8 ကို usb stick နဲ့ bootable တတ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။လိုအပ်ချပ်အနေနဲ့ကတော့ window 8 iso file လေးလိုအပ်မှာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ ခုတင်ပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
USB device တွေက၀င်မဲ့ Virus များကို အကောင်းဆုံးနဲ့တားစည်းပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး ကုမဏီကထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ အသစ်ကလေးမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ ဆော့ဝဲလ်မသုံးပဲ drive တွေကို ပက်ဝက်လေးနဲ့ပိတ်တဲ့နည်းလေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲဒီပိတ်ထားတဲ့ ပက်ဝက်တွေကိုအလိုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ပြန်လည်ဖြုတ်ပစ်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပျက်စီးနေတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ခွေအသစ်ကလေးပြန် ကူးပေးမဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။အသုံးပြုပုံလည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ video
Firefox ထုတ်ထားတဲ့ Browser လေးပါ အသွင်သစ်ကလေးနဲ့ပါ။ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ firefox နဲ့ တူပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ၀င်းဒိုးမှာ ပါလာတဲ့ Widget တွေကိုအသုံးပြုလို့ ငြီးငွေ့နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် XWidget အလန်းလေးတစ်မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... window7မှာအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာပေါ်က widget တွေကို အစားထိုးပြီး အသွင်သစ်ကလေးနဲ့ ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးမှာပါ အသုံးပြုရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်။ အသစ်အသစ်တွေကိုမှ စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafer မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Microsoft Windows 8 /7/ XP Activator (All Edition)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... window အားလုံးအတွက် All activator လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Beginner Mode >>> Window XP, Window Vista, Window 7, Windows Embedded 7, Windows Server 2008 (R), Windows Server 2008 R2 Advenced Mode >>> Windowss OEM Activator, Windows KMS Activator, 7/R2 Pirate Activator, Window XP Activator, Office KMS Activator, Off-Line Check, On-Line Activator Check Tweak >>> System Tweak, Token optmization, System Files Chacker, Adminisator Account Status, Take Ownership, Remove Watermaker, Remove Temporary Files Utilities >>> Registry Workshop, VistaBootPro, HDTunePro, Ultra ISO Premium Edition, SCREEN2EXE, x86 Ready For 4GB, Window System OEM Logo စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်... အာက်မှာလည်း နမူနာပုံတွေနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ခုနောက်ဆုံးထွက်လေးမို့ အသစ်သစ်ကလေးတွေမှ သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
ဘာဆော့ဝဲလ်မှ သုံးစရာမလိုပဲ Drive တွေကို Protect လုပ်နည်း (BitLocker Drive Encryption)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Drive တွေကို Protect လုပ်ထားချင်သူများအတွက် ဘာဆော့ဝဲလ်မှ သုံးစရာမလိုပါဘူး စိတ်လဲ စိတ်ချရတဲ့ နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပထမဆုံး window7ရဲ့ search programs and files ဆိုတဲ့နေရာမှာ Bitlocker Drive Encryption ဆိုတာလေး ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ ဖွင့်လိုက်ပါ။ အပေါ်က ပုံလေးလိုပေါ်လာမှာပါ။မိမိ protect လုပ်ချင်တဲ့ drive ကိုရွေးပြီး Turn on bitlocker ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Internet Download Manager သုံးလို့ လိုင်စင်စိတ်ညစ်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ ။ ဆိုက်ပေါ်မှာတောင်းထားတယ် ဆိုပေမဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအသုံးပြုဖို့ အတွက်ပါ။ free ပေးထားတာပါ လိုင်စင်မလိုပါဘူး အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... PDF ဖိုင်တွေကို လေးလံခြင်းမရှိပဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး ဖတ်နိုင်တဲ့ eXPert PDF Reader လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Adobe Reader X ထက်သုံးရတာ ပိုပေါ့ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်သလို Free ပေးတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒေါင်းလော့ပါယူနိုင်ပါတယ်... ကျွန်တော်ကတော့ Mediafire မှာပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Exploer အတွက် site ပေါ်က video တွေကို တိုက်ရိုကကြည့်ဖို့ flash player လေးကို အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... မိမိရဲ့ window7မှာ IE ကို version မြင့်လိုသူ သူငယ်ချင်းများအတွက် Internet Explorer 9.0 ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ ဗားရှင်းအသစ်ကလေးက တော့ အသွင်အပြင်လေးနဲ့ အသုံးပြုရတာလည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားပါတယ်။ လေးဒါတွေ လည်းသိပ်မရှိတော့ပါဘူး အကြိုက်တွေ့ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Internet Download Manager မလိုပဲ Youtube မှဒေါင်းနည်းလေးပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Download Manager မလိုပဲ Youtube မှဒေါင်းနည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... မိမိဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ချင်တဲ့ video ဖိုင်လေးကို ရှာလိုက်ပါ။ တွေ့ရင်တော့ ဒေါင်းချင်တဲ့ ဖိုင်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ခုလိုလေးထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။
Facebook Will End On 15 october 2012 (15 october 2012 ရက်နေ့တွင် facebook ၀ဘ်ဆိုက် Down ပါမည်။ )
15 october 2012 ရက်နေ့တွင် facebook ၀ဘ်ဆိုက် Down ပါမည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ညီနေမင်း မှာတင်ထားတာလေးဖတ်လိုက်ရလို့ မျှဝေပေလိုက်ပါတယ်။ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အားလုံးနီးပါး သဘောကျနေကြတဲ့ facebook social site ဟာ Down သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့ဆိုက်ထဲမှာ မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံနှင့် data များရှိပါက ကြိုတင်ပြီးတော့ သိမ်းဆည်းထားရကြရန် backup လုပ်ထားကြရန် သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလို Down သွားရတဲ့အတွက် ပိတ်ပြစ်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံသွင်းမှ သုံးလို့ရမှာလား ဆိုတာကိုတော့ တိကျတဲ့ အဖြေမထွက်သေးပါဘူး။ အဲ့တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် backup လုပ်ထားဖို့ကိုတော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်လျှင် ဒီမှာ သွားဖတ်လိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Video ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ Save2pc Ultimate လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ video ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ် ဆွဲချင်သူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဆွဲလို့ရတဲ့ ဆိုက်တွေကတော့ Easy to use - Download from Youtube - Download from Google Video - Save youtube video as an AVI file - Save youtube video as an MPEG file - Save youtube video as an FLV file ဖိုင်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဒေါင်းလို့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံနဲ့ အသွင်အပြင်ကလည်းရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ..
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သူငယ်ချင်းအားလုံးအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ Advanced Installer ဆော့ဝဲတ်တစ်မျိုးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ advanced installer လေးကတော့ ဆော့ဝဲတော်တော်စုံစုံလင်လေးနဲ့ ဒေါင်းလို့ခက်မဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေကို ဒီ program လေးထဲကနေ တိုက်ရိုက် Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Java application နဲ့ window mobile cab,,net application,client/server application တွေကိုလည်း install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်စေဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ System care တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Tune Up 2013 Portable Full လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးသုံးဘူးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါပဲ program ကြီးကြီးမားမားမသုံးချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် portable version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူလဲ ပြည့်ပြည့်၀၀တော့ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Smart Projects IsoBuster Pro 3.0 Final လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီဆော့ဝဲလေးလည်း အသုံးပြုဘူးကြမှာပါ သူကတော့ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးမို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ function တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေတော့ပိုပြီးစုံစုံလင်လင်လေးပါပါတယ်။ အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen လေးလည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံး project isobuster pro လေးရဲ့ အသုံးပြုပုံများနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာ မူရင်းဆိုက်မှာ ရေးထားတာတွေကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Samsung ပိုင်ရှင်များအတွက် PC နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Samsung Kies လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Samsung android phone များကို root လုပ်တာတို့ firmware ပြန်တင်လို့ ဖုန်း driver အဆင်မပြေသူများအတွက် kies ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဗာရှင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးပြီး မိမိဖုန်းထဲက အရေးကြီး data များနဲ့ contacts များ message များကိုလည်း backup လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် ။
Samsung Kies isaPC Software you can use to connect your PC with your handset. Samsung Kies offers many widgets providing various functions between the PC and phone. Take Kies foraspin to see how useful it can be in managing your files and syncing your Samsung phone with your PC! Install Samsung Kies on your PC and enjoy the option of browsing through Samsung Apps on your large computer monitor. Download multiple applications and transfer them to your mobile with ease and convenience. Enjoy the beauty of Samsung Apps, from your PC to your Samsung mobile. The easiest way to get the latest version of Kies, if you already have the software installed, is to use the built-in update function.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Mozilla FireFox 16.0 Final ကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Facebook မှာတင်ထားတာတွေကို ဒေါင်းချင်ရာဒေါင်းဖို့အတွက် Bigsoft ကထုတ်တဲ့ Bigasoft Facebook Downloader လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Video, MP3 စတာတွေကို လွယ်ကူစွာဒေါင်းလော့ယူနိုင်တဲ့အပြင် Convert ပါလုပ်နိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတ်ယ်... အမြဲတန်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Angry Birds ကစားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Angry BirdsRio 1.4.4 လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Install လုပ်ပြီးသွားရင် Patch ခြိုးပေးပါ ပြီးမှ Notepad ထဲမှ ကီးကို copy ကူးပြီး ထည့်ပေးပါ... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Android သမားများအတွက် ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန် လေးကို ပူဇော်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ အမျိုးကောင်းသား မှာတင်ထားတာလေးကို Download ယူပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ... ပိဋကတ်(၃)ပုံမြန်မာပြန် For PC အတွက်ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Nero Burning ROM 12 v12.0.00300 Multilingual v12.0.00300 Multilingual
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ခွေကူးတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီး Nero Burning ROM 12 v12.0.00300 လေးထွက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Win 8 နှင့် compatible ဖြစ်တယ်ဆိုထားပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial Key ထည့်ပေးထားပြီး ခုချိန်ထိတော့ Key ကအဆင်ပြေပါတယ် တကယ်လို့ Key အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်လို Full Version ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် www.nero.com မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Kaspersky Keys for All Product Kaspersky (6.102012)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar key လေးတွေ အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Mediafire မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Windows Registry အကြောင်းလေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Introduction to Windows Registry (မောင်ထူးချွန်) စာအုပ်ကလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... စာမြည်းလေးကို ပုံနှင့်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို ကျွန်တော့်တို့ ဘော်ဒါကြီး အိုင်တီမုဆိုး မှတောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာ တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် Revo Uninstaller Pro 2.5.9 update လေးထွက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်လို့ လက်ရှိသုံးနေပါတယ် ... သူ့ရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားသလို အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... သူ့ဆိုက်မှာ Tutorials တွေ screenshorts တွေအပြင် အသုံးပြုပုံ pdf တွေပါတင်ပေးထားပြီး Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... တစ်ချို့ software တွေကို uninstall လုပ်တဲ့အခါ restart တောင်းရင် မလုပ်ပဲ safe, Moderate, Advanced ဆိုတဲ့ modes သုံးမျိုးမှာ safe modes ကိုရွေးပြီး scan လုပ်ပြီး မလိုအပ်ပဲကျန်နေတာတွေကို ဖျက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်... နောက်တစ်ခု ကြိုက်တာက KBG archiver လိုဖိုင်ချုံတဲ့ ဆော့ဝဲလ်မျိုးကို install လုပ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာ Revo Uninstaller လေးနဲ့ Install လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Video ဖိုင်တွေကို လိုအပ်သလို ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက် Xilisoft ကထုတ်တဲ့ Xilisoft Video Cutter လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ... အသုံးပြုပုံလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ် ပုံမှာ ပြထားသလိုအဆင့်သုံးဆင့်ပြုလုပ်ယုံပါပဲ... အသေးစိပ်လေ့လာလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.... (လိုသလိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို ပြန်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ Boilsoft Video Joiner 6.57.13 လေးကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ)